Impulse-Control Disorders ၏ Compulsive Aspects (2006) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
မြောက်အမေရိက Am ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC မတ်လ 7, 2007 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ ဇွန် 2006; 29 (2): 539-x ကို။
Doi: 10.1016 / j.psc.2006.02.002
Jon အီး Grant က, JD, MD MPHa,* နှင့် မာ့ခ် N. Potenza, MD, Ph.Db
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်အမေရိက Am
အန္န, တစ်ဦး 32 နှစ်အရွယ်လက်ထပ်မိန်းမ, ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူဖော်ပြထား "compulsive ။ " သူမဟာမထိန်းချုပ် shoplifting ၏နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စတင်တစ်ဦးသမိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမသည်အနည်းငယ်လသင်တန်းကိုကျော်သူမအကြောင်းစဉ်းစား, ခိုးယူနှင့်အတူ "အစွဲအလမ်း" ဖြစ်လာတယ်ကြောင်းသတင်းပေးပို့ "လူအပေါင်းတို့သည်နေ့ရက်သည်။ " သူမဟာသူမရဲ့ shoplifting သူမသူငယ်ချင်းများနှင့်သကြားလုံးခိုးတဲ့အခါမှာစတင်ခဲ့နှင့်လအနည်းငယ်တစ်ဦးကျြောကာလအတှငျးသို့တီထွင်ကြောင်းသတင်းပေးပို့ သူသည်ကိုယ်အားဖြင့်ပွုတျောမူသောတစ်ဦးနီးပါးနေ့စဉ်ရိုးရာဓလေ့။ အန္နသူမကလက်ရှိတွင်နှစျဦးမှအဆအပတ်တိုင်း shoplifts ကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်။ သူမသည်တစ်ဦး "အဆင့်မြင့်" သို့မဟုတ် "အအလုအယက်" ဟုသူမကခိုးယူတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကတင်ပြထားပါတယ်။ သူမသည်အဓိကအားထိုကဲ့သို့သောခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆပ်ပြာအဖြစ်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ, ခိုးယူ။ သူမသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အတူတူပင်ကို item multiple ဗားရှင်းခိုးယူ။ အန္နသူမကသူမ၏ဗီရိုထဲမှာဝှက်ထားတူညီခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆပ်ပြာ၏သေတ္တာများရှိကြောင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ သူမသည်သူမကိုမသုံးပါဘူးခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆပ်ပြာခိုးယူခြင်းနှင့်အခြားစတိုးဆိုင်မှာသူမ၏ပိုမိုနှစ်သက်ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆပ်ပြာဝယ်ယူ။ သူမခေါင်းလျှော်ရည်ဖယ်မထားဘူးအဘယ်ကြောင့်ဟုမေးသောအခါ, အန္နသည်ဤထုတ်ကုန်ရှိခြင်းသူမ၏ "နှစ်သိမ့်" အဲဒီကတင်ပြထားပါတယ်။ အန်နာရဲ့ shoplifting တစ်ကြိမ်နာရီ2မှ3လောင်လိမ့်မည်။ အန်နာလည်းနေ့စဉ်အတှေးအဖော်ပြထားတယ်နှင့်နေ့ရက်တိုင်း3နာရီ4များအတွက်သူမ၏ preoccupy ကြောင်း shoplift ဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။ သူမတစ်ဦးစတိုးဆိုင်ရတစ်ခုခုကိုခိုးယူနိုင်အောင်သူမကပင်, မပြီးဆုံးသေးသောစီမံကိန်းများနှင့်အတူအစောပိုင်းအလုပ်စွန့်ခွာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သူမသည်သူမခိုးယူအချက်တွေကိုဝယ်ယူကြောင်းသူ့ကိုပြန်ပြောသည်, သူမ၏ခင်ပွန်းမှတည်ရှိသည်။ အန်နာပစ္စည်းများကို shoplift ဖို့ "အနိုင်အထက်" feeling ကတင်ပြထားပါတယ်။
အန္န obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) သို့မဟုတ် kleptomania ထံမှခံရသလား သူမ၏အပြုအမူ, compulsive ထကြွလွယ်သော, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးလား? ဘယ်လိုသူမ၏အပြုအမူ၏စိတ်ကူးက Anna ရဲ့အပြုအမူများ၏ကုသမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ,? အန်နာတစ်ဦးရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor ၏မြင့်မားထိုးရာမှအများဆုံးအကြိုးရှိစေခြင်းငှါ,, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးခံစားချက် stabilizer သို့မဟုတ် naltrexone ပိုပြီးထိရောက်ရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါ့မလား
Impulse အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအဘို့နှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲအတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပဖြစ်စေလှုံ့ဆော်မှုမှလျင်မြန်စွာ, unplanned တုံ့ပြန်မှုဆီသို့တစ်ဦးဓာတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး  ။ အချို့သောမမှန်တရားဝင်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန် (ICDs) အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်သော်လည်း, Impulse အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်၏အဓိကဒြပ်စင် (ဥပမာ, ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်, စိတ်ကြွရောဂါ, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်, အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ) ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး [အပျော်အပါးသို့မဟုတ်ဆန္ဒပြည့်ပေးမပေး, စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ကာကွယ်ပေးနိုင်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ် compulsive သတ်မှတ်ပါတယ်2] ။ OCD compulsive features တွေနှင့်အတူပါဆုံးသိသာရောဂါဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, compulsive [မကြာခဏစိတ်ရောဂါမမှန် (ဥပမာ, ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်, schizophrenia) ၏နံပါတ်တစ်ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်3].
တချို့က Impulse နှင့် compulsive ၏ domains များလုံးဝဆန့်ကျင်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြပေမယ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုပိုမိုအနုစိတ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ compulsive နှင့် Impulse အားဖြင့်အချို့အပြုအမူတွေ၏နားလည်မှုနှင့်ကုသမှုနှစ်ခုစလုံးရှုပ်ထွေး, တူညီတဲ့မမှန်အတွက်သို့မဟုတ်တူညီသောမမှန်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းပူးတွဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ICDs, Classical Impulse ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရောဂါပိုမိုမကြာသေးမီက compulsive ၏အင်္ဂါရပ်များရှိသည်ကိုတွေ့ပါပြီ။ ဤဆောင်းပါး၏တစ်ဦးကဗဟိုရည်ရွယ်ချက်မှာ compulsive ICDs မှုနှငျ့ဆဘယ်လိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဆောင်းပါးကိုလည်း OCD နှင့် ICDs အကြားဆက်ဆံရေးစူးစမ်း။
သမိုင်းကြောင်းအရ, ICDs များထဲမှစိတ်ကူး [တစ်ခု obsessive-compulsive ရောင်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ခဲ့သည်4] ။ ICDs ၏ဤကနဦးနားလည်မှုရရှိနိုင်ပါကဤရောဂါ၏လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများပေါ်ဒေတာ, မိသားစုဂီယာ၏ပုံစံများနှင့် pharmacologic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုမှတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ အဆိုပါ Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်များတွင်ထုတ်ဝေလေး, စာသား (DSM-IV-TR) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော, ICDs ၏အမျိုးအစားတခြားနေရာလက်ရှိခွဲခြားမရပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါ, kleptomania, pyromania, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG), နှင့် trichotillomania ပါဝင်သည်။ အခွားသောရောဂါလက်တွေ့, ရိပ်မိဖြစ်စဉ်အပေါ် အခြေခံ. ထည့်သွင်းမှုအတွက်အဆိုပြုထားနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဇီဝတူညီခဲ့ကြပြီ psychogenic excoriation (အသားအရေကောက်နေ), compulsive ဝယ်, compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် Non-paraphilic compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ အဆိုပါအရာသည်ဤ ICDs လက်တွေ့, မျိုးဗီဇ, ဖြစ်စဉ်ဝေမျှဖို့အတိုင်းအတာများနှင့်ဇီဝ features တွေမလုံလောက်မှု, နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ICDs နေဆဲအတော်လေးခွဲဖြစ်သော်လည်းဤရောဂါသုတေသနမကြာသေးမီကတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကနေ Data ဟာရှုပ်ထွေး ICDs နှင့် OCD အကြားဆက်ဆံရေးဟာ, အ ICDs အတွင်းပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနှင့် Impulse နှင့် compulsive အကြားရှုပ်ထွေးထပ်တူအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အများဆုံး ICDs အပေါ်တိကျခိုင်မာစွာသုတေသနပြုကန့်သတ်သောကွောငျ့, ဒီဆောင်းပါး, အဓိကအား PG နှင့် trichotillomania အပေါ်အများဆုံးသုတေသနအာရုံကိုလက်ခံရရှိကြောင်းနှစ်ခု ICDs အလေးပေး။ ဒါဟာအစ Clinician နှင့်သုတေသီများအနေဖြင့်တိုးမြှင့်အာရုံကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့နည်းကတခြားစိတ်ရောဂါမမှန်ခြင်းထက်လေ့လာခဲ့ပေမယ့်, kleptomania, သုံးသပ်ပြီး။ အဆိုပါဆောင်းပါးသည်ဤ ICDs နှင့် OCD, အ ICDs ၏ compulsive ရှုထောင့်နှင့် ICDs အတွက် compulsive အကဲဖြတ်များအတွက်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုသုံးသပ်ပြီး။
လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူများ၏ဇွဲနဲ့မှုများထပ်တလဲလဲ maladaptive ပုံစံများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ PG, [ချို့ယွင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာ, အသက်ရှင်ခြင်း၏လျော့ချအရည်အသွေး, နှင့်ဒေဝါလီခံမြင့်မားမှုနှုန်း, ကွာရှင်းနှင့်ထောင်ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်5] ။ PG များသောအားဖြင့်ယောက်ျားတစ်ဦးအစောပိုင်းကအသက်အရွယ် [မှာစတငျဖို့ထိန်းအတူအစောပိုင်းလူကြီးအတွက်ကစတင်ခဲ့သည်6] ။ တည်းကကုသမှုမရှိဘူး left လြှငျ, PG နာတာရှည်, ထပ်တလဲလဲအခွအေနေဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
compulsive အချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှသို့မဟုတ်တစ်ပုံစံဖက်ရှင်အတွက်အဆိုအရဖျော်ဖြေထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေကိုရည်ညွှန်းသည်နှင့် PG compulsive အများအပြား features တွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ PG လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အပြုအမူ၏ချို့ယွင်းတားစီး၏ထပ်တလဲလဲအပြုအမူအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ PG ရှိသည်သောလူများသည်မကြာခဏခုခံတွန်းလှန်ရန်ခက်ခဲသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်လောင်းကစားဝိုင်းကိုဖော်ပြရန်, ဤလေးစားမှုအတွက် PG OCD များ၏မကြာခဏ, အလွန်အကျွံမလိုအပ်သောနှင့်မလိုချင်တဲ့ထုံးတမ်းဆင်တူပုံရသည်။ ထို့အပြင် PG မကြာခဏသူတို့ရဲ့လောင်းကစားဝိုင်း (အထူးသဖြင့်အထိုင်စက်တွေအပေါ်ဥပမာအခြို့သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်အခါလောင်းကစားသို့မဟုတ်လောင်းကစားဝိုင်း) နဲ့ဆက်စပ်တိကျတဲ့ထုံးတမ်းများရှိသည်သောသူတစ်ဦးချင်းစီ။ PG နှင့် OCD အကြားနောက်ထပ် putative link ကို [လူမှုရေးသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်လည်ပတ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းစေပါတယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင့်အလွန်အကျွံ, ဖြစ်နိုင်သည်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ PG သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ propensity ဖြစ်ပါသည်7] ။ OCD ၌ရှိသကဲ့သို့, ၏ compulsive အပြုအမူမကြာခဏ [ဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အစပျိုး PG-လောင်းကစားဝိုင်း-ဖြစ်ပါတယ်8] ။ PG သူတစ်ဦးချင်းစီကိုမကြာခဏ [အလောင်းအစားသူတို့ရဲ့ရမ္မက်စိုးရိမ်စိတ်, ဝမ်းနည်းမှု, ဒါမှမဟုတ်အထီးကျန်ခံစားချက်တွေကိုခြင်းဖြင့်အစပျိုးဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့9,10].
လေ့လာရေး PG သူတစ်ဦးချင်းစီ [တစ်သက်တာခံစားချက် (60% -76%), စိုးရိမ်ပူပန် (16% -40%), နှင့်အခြား (23%) ICDs မြင့်မားမှုနှုန်းရှိသည်တသမတ်တည်းရှာတွေ့5,11,12] ။ PG နှင့် OCD အကြားပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုများ၏နှုန်းထားများသို့သော်အများအားဖြင့်ကိုက်ညီမှုခဲ့ကြပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, PG ရှိသည်သောဘာသာရပ်များ၏နမူနာအတွက် Co-ဖြစ်ပေါ် OCD ၏နှုန်းထားများ [1% ကနေ 20% အရွယ်ရှိပါပြီ5] အချို့နှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်, အထွေထွေလူဦးရေမှာတွေ့ရှိထက် OCD မြင့်မားမှုနှုန်း (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2%) ကိုရှာတွေ့လေ့လာမှုများ။ အဆိုပါစိန့်လူးဝစ် epidemiological ရေဝေရေလဲဧရိယာလေ့လာမှုသို့သော်, (Non-လောင်းကစားသမားတွေနဲ့အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေအတွက် OCD များအတွက် 0.6 တစ်ခုလေးသာမှုအချိုးအစား) ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် OCD အကြားမျှအရေးပါသောဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတွေ့  ။ ဒီလေ့လာမှု 1980s အတွက်ဒေတာစုဆောင်းပေမယ့်, တကအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာ OCD နှင့် PG နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ DSM-based diagnoses များအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သောအတွက်ယနေ့အထိထုတ်ဝေတစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။
ရှိလျှင် OCD သူတစ်ဦးချင်းစီအကြား PG ၏လေ့လာရေး, PG နှင့် OCD အကြားဆက်ဆံရေးဟာအနည်းငယ်သာအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ သေးငယ်တဲ့ OCD နမူနာ၏လေ့လာမှုများ 2.2% ကနေ 2.6% အထိ PG နှုန်းထားများအစီရင်ခံတင်ပြကြပေမယ့်လည်း [14,15] မူလတန်း OCD (ဎ = 293) သူဘာသာရပ်များ၏ကြီးမားသောနမူနာတစ်ခုမကြာသေးမီကပြီးစီးလေ့လာမှုလက်ရှိ (0.3%) နှင့်တစ်သက်တာ (1.0%) PG ၏နှုန်းထားများတွေ့ရှိခဲ့  အထွေထွေလူဦးရေ (0.7-1.6%) ရှိသူတို့ထက်မ သာ. ကြီးမြတ်ကြောင်းကို  ။ ဤရွေ့ကားမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက် PG ၏လက်ရှိနှင့်အတိတ်နှစ်ဦးစလုံးနှုန်းထားများ 2000% [ထက်နိမ့်ခဲ့ကြတယ်ရသော OCD သူထက်ပိုမို 1 တစ်ဦးချင်းစီ၏နမူနာအနေဖြင့်သူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းများမှာ17] ။ အလားတူပင် OCD probands တစ်မိသားစုလေ့လာမှု [(ဖြီးလိမ်းပုံနှင့်အစာစားခြင်းမမှန်၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ) ယေဘုယျအားဖြင့် OCD နှင့် PG သို့မဟုတ် OCD နှင့် ICDs အကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးသက်သေအထောက်အထားမတှေ့18].
PG ရှိသည်သောဘာသာရပ်များ၏မိသားစုသမိုင်းလေ့လာမှုတွေကန့်သတ်ကြသည်။ Black နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်  သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ PG နှင့် 17 သူ 75 ဘာသာရပ်များဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ 1% ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်အဘယ်သူအားမျှနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, (ရပ်ရွာထဲတွင်နှုန်းထားများဆင်တူ) OCD ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နမူနာအသေးခဲ့ပေမယ့်, ထိုလေ့လာမှုဘာသာရပ်များနှင့်ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများအတွက်ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်စနစ်တကျအင်တာဗျူးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ OCD probands ၏လေ့လာမှု၌ရှိသကဲ့သို့, PG သူဘာသာရပ်များနှင့်၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏မိသားစုလေ့လာမှု PG နှင့် OCD အကြားတစ်ဦး link ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပေ။
OCD နှင့်အတူမျက်နှာပြင် PG ရှယ်ယာအပေါ်အများအပြားဖြစ်စဉ် features တွေပေမယ့်, အချက်အလက်များ၏အများစုကဤပုံမမှန်ကြားရှိပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုမွှငျ့တငျမပေးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထိုသို့ PG မျိုးစုံ compulsive features တွေရှိပါတယ်ပုံရပေမယ့် OCD မြင့်မားမှုနှုန်းနှင့်အတူဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဒီလေ့လာရေးအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအမျိုးအစား diagnoses ၏ကန့်သတ်မှုပါဝင်လိမ့်မည်။ တစ်ခုကအခြား, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သီးသန့်မပေးရှင်းပြချက် compulsive features တွေတစ်ခုချင်းစီရောဂါအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြသည်ပေမယ့်, ထိုရောဂါများ၏အခြေခံဇီဝဗေဒကွာခြားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား compulsive ၏ရှုထောင့်ကတော့မမှန်အကြားကွဲပြားစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။
OCD နှင့် PG နှင့်အခြား ICDs အတွက် compulsive အကဲဖြတ်တစ်ဦးချင်းစီရောဂါအတွက် compulsive ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းပေလိမ့်မည်။ များစွာသောလေ့လာမှုတွေ PG အတွက် Impulse နှင့်ဆက်စပ် Construction (ဥပမာ, အာရုံခံစားမှုရှာ) အကဲဖြတ်ကြပေမယ့် [5,20] အတော်လေးအနည်းငယ် PG အတွက် compulsive ၏ဆောက်လုပ်ရေးစူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုကို (Padua Inventory) ခုနှစ်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ [compulsive တစ်အတိုင်းအတာအပေါ်သာမန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားထိန်းချုပ်မှုသွင်းယူ21] ။ PG ၏ compulsive နှင့်ထကြွလွယ်သောရှုထောင့်ကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားနေတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု paroxetine နှင့်အတူကုသမှု 38 ရက်သတ္တပတ်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက် 12 ဘာသာရပ်များဆနျးစစျဖို့ Padua Inventory အသုံးပြုသော  ။ အဆိုပါ Padua Inventory အစီအမံ obsessive နှင့် compulsive လေးယောက်အချက်များပါရှိသည် :
ထိုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက် Impulses သတင်းပို့အဖြစ်မော်တာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောရမ္မက်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်တိုင်းတာသည့်မော်တာလှုပ်ရှားမှုများ, ကျော်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှု
အခြေခံမှာပြင်းထန်မှု PF PG လက္ခဏာတွေ (အထူးသ, အ Padua Inventory ၏ 1 နှင့်4အကြောင်းခံအချက်များ) Impulse နှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံး၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကုသမှုစဉ်အတွင်း Impulse နှင့် compulsive ၏အစီအမံအပေါ်ခြုံငုံရမှတ်သိသာသည့် Padua Inventory ၏အချက် 1 တွင်တွေ့မြင်လျှောက်လျော့နည်းနှင့် Eysenck Impulse မေးခွန်းလွှာများ Impulse subscales အတူလျော့  ။ ဒီလေ့လာမှုက PG အတွက် compulsive နှင့် Impulse ရှုပ်ထွေးပြီးဖက်ရှင်အတွက်အပြန်အလှန်ကြောင်းအကြံပြုနှင့် Impulse နှင့် compulsive ၏အစီအမံကုသမှုရလဒ်ကိုမှလေးစားမှုနှင့်အတူဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဒီတွေ့ရှိချက်များ၏စောဒနာ compulsive သို့မဟုတ် Impulse (သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီ၏သီးခြားရှုထောင့်) PG များအတွက်ကုသမှုပစ်မှတ်ကိုယ်စားပြုအံ့သောငှါဖြစ်၏။
pathogenesis ပွဲတစ်ပွဲမမှန် related ရှိမရှိ၏အရှိဆုံးတရားဝင်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သော်လည်းသုတေသနတစ်ခုသာကျဲငွေပမာဏ PG ၏ဖြစ်နိုင်သော neurobiologic ဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်နှင့်အထောက်အထား OCD တွင်တွေ့မြင်နေတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရောဂါဗေဒအကြံပြုထားသည်။ လောင်းကစားဝိုင်းတစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှုအထီးရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်တိုကျတှနျးထားသ PG cue အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံကနေကွဲပြားအာရုံကြော features တွေ (အတော်လေးထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက PG ရှိသည်သောဘာသာရပ်များအတွက် cortical, Basal ganglionic နှင့် thalamic ဦးနှောက်ဒေသများအတွင်း activation လျော့နည်းသွား) ရှိကြောင်းအကြံပြု OCD ၏ -provocation လေ့လာမှုများ (အတော်လေးတိုးမြှင့် cortico-Basal-ganglionic-thalamic လှုပ်ရှားမှု) [24,25] ။ PG ၏ neurobiology အပေါ်သုတေသနပြုတိုးပွားလာနေသည်သွားရမည်အကြောင်း, OCD မှ PG ၏ neurobiologic ကြားဆက်ဆံရေးအရည်အချင်းပြည့်မီခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ PG နှင့် OCD ပိုပြီးစနစ်တကျလေ့လာမှုများ (အတူတူပင်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးဥပမာများကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်သောသူတို့နှင့်ဆနျ့ကငျြဘကျအောကျခံ) လိုအပ်နေပါသည်။
မူလကက PG, OCD ကဲ့သို့ serotonin reuptake inhibitors (SRIs) မှတစ်ဦးဦးစားပေးတုံ့ပြန်မှုကိုသရုပ်ပြစေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့သည်။ PG များ၏ကုသမှု SRIs ၏ကို double-မြင်နိုင်, ကျပန်း pharmacotherapy စမ်းသပ်မှုတွေထဲကနေဒေတာ, [သို့သော်အပြီးအပြတ်ကောက်ပါပြီ7] အချို့အတွက်မဟုတ် SRIs ၏အခြားစမ်းသပ်မှုများတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကျော်သိသိသာသာအားသာချက်ဖေါ်ပြခြင်းဆေးနှင့်အတူ [26-29] ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, PG [opioid ရန်မှတုံ့ပြန်မှုကိုသရုပ်ပြထားပါတယ်30,31] OCD ကုသထိရောက်သောဖြစ်ပြခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ pharmacologic ကုသမှု PG များ၏တုံ့ပြန်မှုရှင်းလင်းစွာကုသမှု၏ရွေးချယ်မှုဆုံးဖြတ်ရန်မလုံလောက်သောလေ့လာခဲ့ပြီ။ အရာ compulsive ၏အစီအမံ PG ရှိသည်သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်ကုသမှုရလဒ်ကိုဆန်းစစ်ခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အသုံးပြုတဲ့သူသတ်သတ်မှတ်မှတ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူတိကျသောကုသမှုကိုက်ညီစေရန်အသုံးပြုစေခြင်းငှါဖို့အတိုင်းအတာ။
PG ၏ compulsive ရှုထောင့်ဖြေရှင်းသောအသိမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကုသမှု [အစောပိုင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုပြသကြ32] ။ PG များအတွက်သိမှု-အပြုအမူကုထုံး, သို့သော်, [OCD များအတွက်အသုံးပြုသောထိတွေ့မှုများနှင့်တုန့်ပြန်ကာကွယ်တားဆီးရေးကုသမှုအနေဖြင့်မတူပါ33] ။ သိမှုကုထုံးကျပန်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖြစ်ရပ်များအပေါ်ရိပ်မိထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. လူနာရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲအာရုံစိုက်။ သိမှုကုထုံးကိုလူနာဖြစ်နိုင်ခြေ, ritualistic မဟုတ်အပြုအမူ၏ဥပဒေများအလောင်းကစားများ၏ရလဒ်ကိုထိန်းချုပ်နားလည်ကူညီပေးသည်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာတော့တစ်ဦးချင်းစီသိမြင်မှုကုထုံးလျှော့ချလောင်းကစားဝိုင်းအကြိမ်ရေအတွက်ရလဒ်နှင့်ချောင်းမြောင်း-စာရင်းထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာလောင်းကစားဝိုင်းကျော်ရိပ်မိ Self-ထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင့်  ။ ချောင်းမြောင်း-စာရင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါလက္ခဏာတွေ relapse ကာကွယ်တားဆီးရေးကိုလည်းထုတ်လုပ်တိုးတက်မှုပါဝင်သည်သောဒုတိယလေ့လာမှု .
သိမှု-အပြုအမူကုထုံးကိုလည်း PG ဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအပြုအမူတွေအစားအဆိုပါအပြုအမူဒြပ်စင်လိပ်စာများ။ (1) တစ်ဦးချင်းစီလှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းချုပ်နှင့်တုန့်ပြန်ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်အတူ Vivo ထိတွေ့မှုအတွက်, (2) အုပ်စုတစ်စုသိမြင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း, (3) တစ်ဦးနည်းလမ်းများ 1 နှင့်2၏ပေါင်းစပ်, နှင့် (4) တစ်ချောင်းမြောင်း-စာရင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်း: တစ်ခုမှာကျပန်းရုံးတင်စစ်ဆေးလေးကုသမှုအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ။ 12 လအတွင်းမှာ abstinence သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးလောင်းကစားများ၏နှုန်းထားများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကုသမှု (69%) အုပ်စုသိမြင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း (38%) ထက်အုပ်စုနဲ့ပေါင်းစပ်ကုသမှု (38%) အုပ်စုများ [အတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြ36] ။ relapse-ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများအပါအဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်ခြင်းနှင့်များ၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုသိမြင်-အပြုအမူကုထုံးအပျေါမှာအခြေစိုက်လွတ်လပ်သော, ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး, လမ်းအောက်တွင်လက်ရှိဖြစ်၏ ကနဦးရလဒ်များကို [ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်သိမြင်-အပြုအမူကုထုံး၏ထိရောက်မှုအကြံပြု37].
(အမူအကျင့်-သိမြင်မှုနှင့်အစိတ်ခွန်အားနိုးတိုးမြှင့်နည်းစနစ်ပါဝင်သည်) ကိုတစ်ဦးစာအုပ်ပုံနှိပ်၏ပုံစံအတွက်အကျဉ်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတစ်ခုမှာလေ့လာမှုထိုစာအုပ်ပုံနှိပ်အသုံးပြုမှုပေါင်းတဦးတည်းဆရာအင်တာဗျူးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့  ။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများတစ်ဦး6လနောက်ဆက်တွဲမှာလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အလားတူပင်သီးခြားလေ့လာမှုတစ်ခုစာအုပ်ပုံနှိပ်တဲ့စာအုပ်ပုံနှိပ်ပေါင်းတယ်လီဖုန်းစိတ်ခွန်အားနိုးတိုးမြှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးချောင်းမြောင်းစာရင်း၏အသုံးပြုမှုကိုသုံးစွဲဖို့လောင်းကစားသမားတွေတာဝန်ပေးအပ်။ တစ်ယောက်တည်းစာအုပ်ပုံနှိပ်သုံးပြီးသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်, ထိုစိတ်ခွန်အားနိုးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပေါင်းစာအုပ်ပုံနှိပ်ဖို့တာဝန်ဟာလောင်းကစားသမားတွေတစ်ဦး2နှစ်နောက်ဆက်တွဲကာလတစ်လျှောက်လုံးလောင်းကစားဝိုင်းလျှော့ချ .
နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများလည်းကျပန်းဒီဇိုင်းများအတွက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ကုထုံးနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း desensitization စုံစမ်းပြီ။ ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုမှာတော့နှစ်ဦးစလုံးကုသလူနာသေးငယ်တဲ့နမူနာများတွင်တိုးတက်မှုအတွက်ရလဒ်  ။ ဒုတိယလေ့လာမှုမှာတော့ 120 ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေခြင်းကိုမနှစ်သက်ကုထုံး, စိတ်ကူးစိတ်သန်း desensitization, Vivo desensitization အတွက်, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအပန်းဖြေဖို့ကျပန်းတာဝန်ကျတယ်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်း desensitization လက်ခံရရှိသင်တန်းသားများကို 1 တစ်လမှာပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်9မှတက်နှစ်ကြာပြီးနောက် .
Trichotillomania ထပ်တလဲလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး, ထိုဆွဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆံပင် [ဆေးခန်းသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ် functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်းအတွက်သိသာဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်2] ။ တစ်ဦးကအခြားနေရာများတွင်ဤပြဿနာအတွက်ဆွေးနွေး trichotillomania [1% နှင့် 3% အကြားခန့်မှန်းခြေပျံ့နှံ့အတူအတော်လေးဘုံဖြစ်ဟန်42] ။ trichotillomania များအတွက်စတင်ခြင်းမှာယုတ်အသက်အရွယ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 13 နှစ် .
ရိပ်မိလျော့နည်းသွားထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူဆွဲဆံပင်၏ထပ်တလဲလဲမော်တာအပြုအမူ OCD တစ်ဒီကဗျာအကြံအစည်ဖြင့်သမုတ်သော။ compulsive အခြေအနေများအမျိုးမျိုးအတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသော OCD, မတူဘဲ, trichotillomania သူတစ်ဦးချင်းစီ [အထိုင်များလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်တဲ့အခါမှာအများဆုံးမကြာခဏဆွဲလေ့44] ။ trichotillomania အတွက်ဆွဲဆံပင်စိုးရိမ်စိတ်လျော့ကျပေမယ့် compulsive OCD အတွက်လုပ်ပေးအဖြစ် OCD compulsive ပုံမှန်အားမသော်လည်း, သူကလည်း, အပျြောအပါး၏ခံစားချက်များကိုထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မည်။
Trichotillomania အစဉ်အလာ [အများစုအမျိုးသမီးထိခိုက်တဲ့ရောဂါအဖြစ်ယူဆထားသည်45] နှင့်မကြာခဏစိတ်ကျရောဂါ (39% -65%), ယေဘုယျစိုးရိမ်သောကရောဂါ (27% -32%), နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု (15% -20%) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, Co-ဖြစ်ပေါ် OCD ၏နှုန်းထားများ [(13% -27%) သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားများမှာ43] ရပ်ရွာ (1% -3%) မှာတွေ့ရှိထက် , ဤ comorbidity အဲဒီနှစျခုမမှန်များ၌တွေ့မြင် compulsive တစ်ခုနောက်ခံဘုံ neurobiologic လမ်းကြောင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်။ Trichotillomania [ပုံမှန်အကွာအဝေးအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ရမှတ်များနှင့်အတူ, စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive လက္ခဏာတွေမြင့်မားမှုနှုန်းနှင့်အတူဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါ44].
OCD သူတစ်ဦးချင်းစီအကြား trichotillomania ၏နှုန်းထားများလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ OCD ဘာသာရပ်များ၏သေးငယ်တဲ့နမူနာသုံးခုလေ့လာမှုများ [4.6% ကနေ 7.1% အထိနှုန်းထားများအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ14,15,47] ။ OCD သူ 293 ဘာသာရပ်များတစ်ခုမှာပိုကြီးတဲ့လေ့လာမှုအသီးသီးတစ်သက်တာနှင့် 1.4% ၏ trichotillomania ၏လက်ရှိနှုန်းထားနဲ့ 1.0%, အစီရင်ခံ  ။ PG နှင့်ဝသကဲ့သို့, မေးခွန်းကဤပုံမမှန်ဖြတ်ပြီး compulsive ၏ဒိုမိန်းဆန်းစစ်ဖြစ်နိုင်သော pathophysiology သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
trichotillomania နှင့် OCD အကြားတစ်ဦးကကြားဆက်ဆံရေး OCD trichotillomania ရှိသည်သောဘာသာရပ်များ၏ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ဘုံကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ trichotillomania ၏မိသားစုသမိုင်းလေ့လာမှုတွေကန့်သတ်ထားပါသည်ပေမယ့်, တဦးတည်းလေ့လာမှု OCD နှင့်အတူတစ်မိသားစုဆက်ဆံရေးအကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု trichotillomania နှင့် 22 ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများသူ 102 ဘာသာရပ်များပါဝင်ပတ်သက်။ (33 ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူဎ = 182) တစ်ဦးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်သောအခါ, trichotillomania probands ၏သိသိသာသာပိုပြီးဆွေမျိုးများ [ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ OCD (2.9%) ရှိခဲ့48] ။ OCD probands တစ်မိသားစုလေ့လာမှုကွာခြားချက်နမူနာအရွယ်အစား [ပေးထားသောကစာရင်းအင်းသိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ, trichotillomania (4% သာရှိပြီးပြည်ပမှ 1%) ရှိခဲ့ထက်ကိစ္စတွင်ဘာသာရပ်များတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအချိုးအစားကိုတွေ့18].
trichotillomania များအတွက်အကဲဖြတ်ကုသ pharmacologic နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကြားဝင်ပါဝင်သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာ OCD များအတွက် pharmacologic ပထမဦးဆုံးလိုင်းကုသမှုတစ်ခု SRI ကို (ဥပမာ clomipramine, fluvoxamine, ဒါမှမဟုတ် fluoxetine) ဖြစ်ပါသည်မြဲမြံစွာတည်သည်။ trichotillomania များအတွက် SRIs ၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါဒေတာများကိုသို့သော်လျော့နည်းယုံကြည်ကြသည်။ တစ်ဦး 10-သီတင်းပတ်အတွင်း desipramine နှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် clomipramine ကို double-မြင်နိုင် Cross-ကျော်ဒီဇိုင်း (Single-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာခဲ-In ၏5ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်တစ်ခုချင်းစီကိုအေးဂျင့်ဘို့အ2ရက်သတ္တပတ်)  ။ clomipramine လက်ခံရရှိသည့်အခါ 13 ဘာသာရပ်များဆယ်နှစ်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ SRIs OCD များအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်သော်လည်းဤဆေးဝါးများ [trichotillomania သုံးခုကျပန်းစမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ရောထွေးသောရလဒ်များကိုသရုပ်ပြပါပြီ50-52] ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, trichotillomania ရှိသည်နှင့်အဘယ်သူသည်ကိုအောင်မြင်စွာတစ်ခု SRI ကိုနဲ့ကုသနေသောလူတစ်ဦးချင်းစီ [OCD ရှိသည်သောသူ SRI ကို-ကုသလူတွေလုပ်ပေးထက်လက္ခဏာ relapse မြင့်မားမှုနှုန်းရှိသည်ဖို့လေ့51].
trichotillomania များအတွက်အကျိုးရှိပြခဲ့ကြသောအခြား pharmacologic အေးဂျင့် OCD များအတွက်ထိရောက်သောခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ထိရောက်မှု၏ဤမရှိခြင်းသည်ဤရောဂါကြားရှိထပ်တူအကြောင်းကိုမေးခွန်းထုတ်။ Christenson နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ  ကို double-မြင်နိုင်, အပြိုင်လေ့လာမှု randomized တစ် 6-သီတင်းပတ်အတွင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာအတူ opioid ရန် naltrexone နှိုင်းယှဉ်။ သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှု trichotillomania လက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုအတိုင်းအတာအပေါ် naltrexone အုပ်စုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ လီသီယမ်၏ open-တံဆိပ်လေ့လာမှုမှာတော့ 8 ဘာသာရပ်များ၏ 10 [ကြိမ်နှုန်း, ဆံပင်ဆွဲပမာဏနှင့်ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာဆွဲထဲမှာလျှောက်လျော့နည်းအစီရင်ခံတင်ပြ53] လီသီယမ်ကိုမကြာခဏ [ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမမှန်သူတစ်ဦးချင်းစီကိုကုသအတွက်အကျိုးရှိသောခဲ့54] ။ လီသီယမ်၏ Open-တံဆိပ်ရုံးတင်စစ်ဆေးကနေအပြုသဘောရလာဒ်များ  မဟုတ်ဘဲအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော features တွေထက်ထကြွလွယ်သောသူကို trichotillomania အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အရေးပါသောကုသမှုပစ်မှတ်ကိုကိုယ်စားပြုသောဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။ ဤပြောဆိုချက်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်မီဒီအယူအဆ၏တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်လိုအပ်ပါသည်။
OCD နှင့် trichotillomania နှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်ကြားဝင်တုံ့ပြန်; သို့သော်အမူအကျင့်ကုသမှု၏ Modes သာအတော်လေးသိသိသာသာကွာခြား။ Azrin နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ  ကျပန်း (ဘာသာရပ်များမှန်ရှေ့တွင်မတ်တပ်ရပ်များနှင့်အမှန်တကယ်ဆွဲခြင်းမရှိဘဲဆံပင်ဆွဲ၏လှုပ်ရှားမှုကိုထုတ်ဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးသောအတွက်) အလေ့အထ-မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ကုထုံးသို့မဟုတ်အပျက်သဘောအလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့ 34 ဘာသာရပ်များတာဝန်ပေးအပ်။ အလေ့အထမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန် 90 လအတွင်းမှာအနုတ်လက္ခဏာအလေ့အကျင့်ဘို့% လျှော့ချရေး4တစ် 52% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 68 လကြာ 3% ထက် ပို. အားဖြင့်ဆွဲဆံပင်, လျှော့ချ။ အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုပါဝင်သည်ခဲ့ပါတယ်, ထို့ကြောင့်အချိန်နှင့်ကုထုံးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအကဲဖြတ်လို့မရပါ။
မကြာသေးမီကလေ့လာမှု [25 ဘာသာရပ်များဖြစ်စေလက်ခံမှုနှင့်ကတိကဝတ်ကုထုံး / အလေ့အထမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်၏ရက်သတ္တပတ် (12 အစည်းအဝေးများ) 10 သို့မဟုတ်စာရင်းစောင့်ဆိုင်းရန် randomized လေ့လာ56] ။ ယင်းကုထုံးဖို့တာဝန်ဘာသာရပ်များအတွက်ချောင်းမြောင်းစာရင်းကိုဖို့တာဝန်ရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆံပင်ဆွဲပြင်းထန်မှုနှင့်ချို့ယွင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချကြုံတွေ့နှင့်တိုးတက်မှု3လနောက်ဆက်တွဲမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
kleptomania ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ (1) လိုအပ်သည့်အရာဝတ္ထုကိုခိုးယူရန်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ခုခံတွန်းလှန်ရန်မှုများထပ်တလဲလဲပျက်ကွက်ပါဝင်သည်; (2) ကိုခိုးယူကျူးလွန်မတိုင်မီတင်းမာမှုတစ်ခုတိုးပွားလာအသိ; (3) အပျော်အပါး, ဆန္ဒပြည့်ဒါမှမဟုတ်ခိုးမှုကျူးလွန်သည့်အချိန်တွင်လွှတ်ပေးရေးတစ်ခုအတွေ့အကြုံကို; နှင့် (4) [အမျက်ဒေါသ, ဒဏ်ထဲကဖျော်ဖြေ, ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ္တမခိုးယူ2].
OCD ကဲ့သို့ပင် kleptomania များသောအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့မဟုတ်အစောပိုင်းလူကြီးကာလအတွင်းပထမဦးဆုံးပေါ်လာတဲ့  ။ အဆိုပါသင်တန်းကိုမှားသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းနှင့်ရောဂါလက္ခဏာဆုတ်နှင့်အတူယေဘုယျအားဖြင့်နာတာရှည်ဖြစ်ပါတယ်။ OCD မတူဘဲ, သို့သော်, အမြိုးသမီးမြား [ယောက်ျား kleptomania ထံမှခံရဖို့ထက်နှစ်ဦးကိုဆပိုများပါတယ်57] ။ တဦးတည်းလေ့လာမှုများတွင်အားလုံးပါဝင်သူများ [ခိုးယူကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါခိုးယူဖို့တိုးမြှင့်ရမ္မက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်57] ။ ရပ်တန့်ဖို့လျော့နည်းသွားနိုင်စွမ်းမကြာခဏ [အများဆုံးဘာသာရပ်များ (77.3%) ကအစီရင်ခံသည်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အပြစ်ခံစားချက်များကိုမှဦးဆောင်57].
kleptomania သူကလူကိုမကြာခဏအများဆုံးစတိုးဆိုင်ထဲကနေခိုးမျိုးစုံနေရာတွေကနေအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကိုခိုးယူပေမယ့်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာတော့လူနာ 68.2% [ခိုးယူပစ္စည်းတန်ဖိုးကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးလာခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်57] ။ (64% -87%) အတော်များများ [ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အပြုအမူအချို့ကိုအချိန်တွင်ဖမ်းမိခဲ့ကြ58] နှင့်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံတော်မူပြီးမှ% အစီရင်ခံစာ 15 မှ 23%  ။ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါသူလူနာအများဆုံးခိုးယူဖို့သူတို့ရဲ့ရမ္မက်ကို စိုးရိမ်. ပြီးနောက်လျော့ခဲ့ကြကြောင်းအစီရင်ခံသော်လည်း, လက္ခဏာလွှတ်ယေဘုယျအားဖြင့် [ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အဘို့ကိုသာကြာမြင့်58] ။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များသော်လည်းပြဿနာအပြုအမူအတွက်ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုသရုပ်ပြပါ။
kleptomania တွင်တွေ့မြင်ဒါကထပ်တလဲလဲအပြုအမူဤဆောင်းပါးကိုဖွင့်လှစ်သောအမှု Vignette ၌ရှိသကဲ့သို့, တစ်ဦးမလှူရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, kleptomania (63%) ရှိသည်သောသူအမြားဆုံးတစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့ခိုးယူကြောင်းအထူးသဖြင့်ပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်  ။ kleptomania သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစာမေးပွဲ [သူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်ရှာကြံ sensation ဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်, အကြံပြု59] နှင့် [ထကြွလွယ်သော60] နှင့်ဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏အပြုအမူတစ်ခုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအန္တရာယ်-ဆန္ဒရှိအဆုံးမှတ်နှင့်အတူကိုရှောင်ကြဉ်ထိခိုက်စေသူ OCD သူတစ်ဦးချင်းစီကနေကွဲပြား  ။ OCD သူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်မတူဘဲ kleptomania သူကလူ [အနေနဲ့တိုက်တွန်းသို့မဟုတ်တဏှာဟာခိုးမြားတှငျပါဝငျခွငျးမတိုင်မီနှင့်ခိုးယူမှုသည်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်းတစ် hedonic အရည်အသွေးကိုသတင်းပို့စေခြင်းငှါ7].
သည်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်မြင့်မားမှုနှုန်း kleptomania ရှိသည်သောလူနာများတွင်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်သက်တာ comorbid ကိုထိခိုက်ချို့ယွင်း၏နှုန်းထားများ [59% ကနေအထိ61]% 100 မှ  ။ လေ့လာရေးကိုလည်း comorbid စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန် (60%% 80 မှ) ၏မြင့်မားသောတစ်သက်တာနှုန်းထားများတွေ့ပြီ [58,62] နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန် (23%% 50 မှ) [58,61].
အရာ OCD နှင့် kleptomania Co-ပေါ်ပေါက်ဖို့အတိုင်းအတာကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။ kleptomania သူတစ်ဦးချင်းစီ၏နမူနာအတွက် Co-ဖြစ်ပေါ် OCD ၏နှုန်းထားများ [6.5% ကနေအရွယ်ရှိပါပြီ61]% 60 မှ  ။ ပြောင်းပြန် OCD နမူနာအတွက် kleptomania ၏နှုန်းထားများ [ရပ်ရွာ (2.2% -5.9%) မှာတွေ့ရှိထက် Co-ဖြစ်ပျက်မှု၏တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းအကြံပြု14,15] ။ OCD kleptomania (293% နှင့် 0.3%) ၏လက်ရှိနှင့်တစ်သက်တာနှုန်းထားများအစီရင်ခံခဲ့သော 1.0 ဘာသာရပ်များ၏တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု  ယေဘုယျစိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာ (7.8% နှင့် 9.3% အသီးသီး) ၏လူဦးရေမှာတွေ့ရှိနှုန်းထက်နိမ့်ခဲ့  ။ အကြီးစားစိတ်ရောဂါ epidemiological လေ့လာမှုများပုံမှန်အားဖြင့်အရှင်က၎င်း၏ပျံ့နှံ့နှင့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုများ၏ပုံစံများနှင့် ပတ်သက်. ရရှိနိုင်အသိပညာကန့်သတ်, kleptomania ၏အစီအမံဖယ်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။
တစ်ဦးကမိသားစုသမိုင်းလေ့လာမှု [သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ 31 ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့် 152 နှင့်အတူသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ kleptomania နှင့် 35 သူ 118 တစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ61] ။ အဆိုပါလေ့လာမှု kleptomania proband ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ 0.7% ထိန်းချုပ်မှု၏မိသားစုများအတွက် 0% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ OCD ခံစားခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သာအမှုအစီရင်ခံစာများနှစ်ခုသေးငယ်တဲ့အမှုစီးရီးများနှင့် pharmacotherapy များထဲမှ Open-တံဆိပ်လေ့လာမှု kleptomania များအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အမျိုးမျိုးသောဆေးအမှုအစီရင်ခံစာများသို့မဟုတ်ကိစ္စတွင်စီးရီးကိုလေ့လာခဲ့ကြနှင့်အတော်ကြာထိရောက်သောတွေ့ပါပြီ: fluoxetine, nortriptyline, trazodone, clonazepam, valproate, လီသီယမ်, fluvoxamine, paroxetine နှင့် topiramate  ။ OCD ၏ကုသမှုမတူဘဲ, serotonergic ဆေးဝါးများမှ kleptomania တစ်ဦးစားပေးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဖို့ရှိတယ်မထင်ထားဘူး။ kleptomania များအတွက်ဆေးဝါး၏တစ်ခုတည်းသောတရားဝင်ရုံးတင်စစ်ဆေး naltrexone တစ် 10-အပတ်က Open-တံဆိပ်လေ့လာမှုမှာ 12 ဘာသာရပ်များပါဝင်ပတ်သက်။ 150 မီလီဂရမ် / ဃတစ်ခုယုတ်ဆေးထိုးမှာ, ဆေးဝါးကိုခိုးယူခြင်း, အပြုအမူခိုးယူအကြောင်းကိုအတှေး, ခိုးယူဖို့ရမ္မက်များ၏ပြင်းထန်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းမှုအတွက်ရလဒ် .
psychotherapies ၏မျိုးစုံအမျိုးအစားများ kleptomania ၏ကုသမှုတှငျဖျောပွထားပြီဖြစ်သော်လည်းမရှိထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေစာပေများတွင်တည်ရှိနေ။ အောင်မြင်မှုသရုပ်ပြအဖြစ်အမှုအစီရင်ခံစာများတွင်ဖော်ပြထား psychotherapy ၏ပုံစံများ [psychoanalytic, ထိုးထွင်းသိမြင်-oriented နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာနည်းစနစ်များပါဝင်သည်58,67] ။ kleptomania များအတွက်ကုထုံး၏အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်စမ်းသပ်မှုတွေထုတ်ဝေခဲ့ကြသောကြောင့်, ဤဆောင်ရွက်ချက်၏ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့ခက်ခဲပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဝင်၏အကွာအဝေး, ဆေးဝါးများနှင့်ဝသကဲ့သို့, kleptomania သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အဆိုပါနိဒါန်းအမှု Vignette တွင်တွေ့မြင်အဖြစ်, ICDs ထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေနှင့်ဤအပြုအမူ၏ချို့ယွင်းတားစီးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ ICDs ၏ဝိသေသအဆိုပါခက်ခဲ-to-ထိန်းချုပ်မှုအပြုအမူတွေ OCD များ၏မကြာခဏ, အလွန်အကျွံမလိုအပ်သောနှင့်မလိုချင်တဲ့ထုံးတမ်းတစ်ခုတူညီမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ICDs နှင့် OCD (ဥပမာ ICDs များ၌တွေ့မြင်တတ်ပြီးသို့မဟုတ်တဏှာပြည်နယ်, အ ICD အပြုအမူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်း hedonic အရည်အသွေး, မကြာခဏ ICD သူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မမြင်အာရုံ-ရှာကြံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးအစား) တို့အကြားကွဲပြားမှု [သို့သော်ရှိပါတယ်7] ။ ICDs နှင့် OCD အကြားခြားနားချက်များနေသော်လည်း compulsive ၏အင်္ဂါရပ်များ ICDs နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကြနှင့်ပဏာမဒေတာ compulsive ၏အင်္ဂါရပ်များအဖြစ် Impulse အချို့ ICDs အတွက်အရေးကြီးသောကုသမှုပစ်မှတ်ကိုယ်စားပြုအံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သုတေသနကန့်သတ်သည်, တွေ့ရှိချက်များမတူညီကြောင့်, က OCD နှင့်အတူလည်းနီးကပ်စွာ ICDs သိရှိနိုင်ဖို့အချိန်မတန်မီပုံရသည်။ အရာပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ် OCD နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ICD ၏တိကျသော ICDs သို့မဟုတ် Subtype အဲဒီမှာတည်ရှိရန်အတိုင်းအတာကိုပိုမိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ အပိုဆောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးတူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားမှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာများအတွက်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ ICDs နှင့် OCD ရမ်းမှဆက်စပ်အဖြစ် compulsive ၏ထို့အပြင်ဆောက်လုပ်ရေး။ ဥပမာအားဖြင့်, SRIs နှင့်အတူ ICDs ၏ကုသမှုရောထွေးရလဒ်များကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်ပေးထားအနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေတိကျတဲ့လူမျိုးကွဲ (ဥပမာ compulsive သို့မဟုတ် Impulse ၏တိကျသော features တွေနှင့်အတူ PG သူတစ်ဦးချင်းစီ) တိကျသောကုသမှု (ဥပမာ သာ. ကောင်း၏သို့မဟုတ်ပိုဆိုးကိုတုံ့ပြန်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်နေပါသည် SRIs) ။ အလားတူပင် compulsive ၏တိကျသောရှုထောင့် ICDs များအတွက်အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များအတွက်ပစ်မှတ်ကိုကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ်။ ICDs ၏အနာဂတ်ဇီဝဗေဒလေ့လာမှု (ဥပမာ, မျိုးရိုးဗီဇ, neuroimaging) လည်းပိုကောင်း OC spectrum ကိုမမှန်ရန်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် compulsive ၏အတိုင်းအတာများပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
အဆိုပါအလုပျဒေါက်တာ Grant ကမှစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားသိပ္ပံ (K23 MH069754-01A1) မှတစ်ဦးထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည်။
1 ။ Moeller အပြည်ပြည်သွား, Barratt ES, Dougherty DM, et al ။ Impulse ၏စိတ်ရောဂါရှုထောင့်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 1783-93 ။ [PubMed]
2 ။ American Psychiatric Association ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းကို manual ။4။ ဝါရှင်တန် (ဒီစီ): American Psychiatric Association စာနယ်ဇင်း; 2000 ။
3 ။ Godlstein RZ, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 159: 1642-52 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ Holland အီး obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်: ခြုံငုံသုံးသပ်။ စိတ်ရောဂါအမ်း။ 1993; 23: 355-8 ။
5 ။ Argo TR, Black က DW ။ လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ။ ခုနှစ်တွင်: Grant က je, Potenza MN, အယ်ဒီတာများ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: ကုသမှုတစ်ခုလက်တွေ့လမ်းညွှန်။ ဝါရှင်တန် (ဒီစီ): အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး, Inc မှ .; 2004 ။ စစ။ 39-53 ။
6 ။ Ibanez တစ်ဦးက, Blanco, C, Moreryra P ကို, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 64: 295-301 ။ [PubMed]
7 ။ je, Potenza MN ပေးသနား။ Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် pharmacological စီမံခန့်ခွဲမှု။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 16: 27-34 ။ [PubMed]
8 ။ et al Potenza MN, Leung HC, Blumberg HP က။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ဦး fMRI Stroop တာဝန်လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160: 1990-4 ။ [PubMed]
9 ။ je ကင်မ် SW ပေးသနား။ 131 အရွယ်ရောက်ပြီးသူရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့ features တွေ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 62: 957-62 ။ [PubMed]
10 ။ Ladd GT ကို, Petri မိုင်။ ကုသမှုရှာကြံရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအကြားကျား, မကွဲပြားမှု။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2002; 10: 302-9 ။ [PubMed]
11 ။ Black က DW, Moyer တီလက်တွေ့ features နဲ့ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များ၏စိတ်ရောဂါ comorbidity ။ စိတ်ရောဂါစားသုံးခြင်း။ 1998; 49: 1434-9 ။ [PubMed]
12 ။ Crockford DN, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် El-Guebaly N. စိတ်ရောဂါ comorbidity: အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှုနိုင်သလား။ 1998; 43: 43-50 ။ [PubMed]
13 ။ et al Cunningham-Williams က RM, Cottler LB, Compton WM, III ကို။ ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေနှင့်စိန့်လူးဝစ် epidemiological ရေဝေရေလဲဧရိယာလေ့လာမှုကနေစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်း-ရလဒ်များကို: အခွင့်အလမ်းတွေကိုယူပြီး။ J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖြစ်၏။ 1998; 88: 1093-6 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Fontenelle LF, Mendlowicz သင်္ဘော MV, obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် Versiani အမ် Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်။ စိတ်ရောဂါ Clin neuroscience ။ 2005; 59: 30-7 ။ [PubMed]
15 ။ Matsunaga H ကို, Kiriike N ကို, Matsui T က, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်အတူဂျပန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာများတွင် Impulse မမှန်။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 46: 43-9 ။ [PubMed]
16 ။ je, Mancebo MC, Pinto တစ်ဦးက, et al ပေးသနား။ obsessive compulsive ရောဂါနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင် Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
17 ။ Holland, E, Stein DJ သမား, Kwon JH, et al ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ၏စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်။ CNS Spectr ။ 1997; 2: 16-25 ။
18 ။ Bienvenu OJ, မြူ JF, ပုစ္ဆာ, MA, et al ။ ဖြစ်နိုင်သမျှ spectrum ကိုမမှန်ဖို့ obsessive-compulsive ရောဂါ၏ဆက်ဆံရေး: တစ်မိသားစုလေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 48: 287-93 ။ [PubMed]
19 ။ Black က DW, Moyer T က, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ဘဝနှင့်မိသားစုသမိုင်း၏ Schlosser အက်စ်အရည်အသွေး။ J ကိုအာရုံကြော Ment dis ။ 2003; 191: 124-6 ။ [PubMed]
20 ။ Tavares H ကို, Zilberman ML, Hodgins, DC, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေနှင့်အရက်သမားအကြားတဏှာ၏နှိုင်းယှဉ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005; 29: 1427-31 ။ [PubMed]
21 ။ Blaszczynski အေရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး compulsive ရောင်စဉ်ပုံမမှန်။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 1999; 84 ။ 107-13 ။ [PubMed]
22 ။ Blanco, C, Grant က J ကို, Potenza MN, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Impulse နှင့် compulsive [စိတ္တဇ] စန်း Juan (Puerto Rico): မူးယစ်ဆေးမူတည်၏ပြဿနာများအပေါ်ကောလိပ်; 2004 ။
23 ။ Sanavio obsessive နှင့် compulsive: အ Padua Inventory ။ Res Ther ပြုမူနေ။ 1988; 26: 169-77 ။ [PubMed]
24 ။ et al Potenza MN, Steinberg, MA, Skudlarski P ကို။ လောင်းကစားရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်တိုကျတှနျးထား: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 60: 828-36 ။ [PubMed]
25 ။ Saxena က S နဲ့, Rauch SL ။ functional neuroimaging နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ၏ neuroanatomy ။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 2000; 23: 563-86 ။ [PubMed]
26 ။ Holland, E, DeCaria CM, Finkell ဖြစ်မှု, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ကျပန်းကို double-မျက်စိကန်း fluvoxamine / ရလဒ်များအရအိပ်ယာ crossover ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 47: 813-7 ။ [PubMed]
27 ။ Kim က SW, Grant က je, Adson DE, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှု paroxetine ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှု၏တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 63: 501-7 ။ [PubMed]
28 ။ Blanco, C, Petkova အီး, Ibanez တစ်ဦးက, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် fluvoxamine ၏တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 14: 9-15 ။ [PubMed]
29 ။ je ကင်မ် SW, Potenza MN, et al ပေးသနား။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏ Paroxetine ကုသမှု: multi-စင်တာထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး randomized ။ int Clin Psychopharmacol ။ 2003; 18: 243-9 ။ [PubMed]
30 ။ je, Potenza MN, Holland, E, et al ပေးသနား။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုထဲမှာ opioid ရန် nalmefene တစ်ပေါင်းစုံပါစုံစမ်းစစ်ဆေး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 163: 303-12 ။ [PubMed]
31 ။ Kim က SW, Grant က je, Adson DE, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုကို Double-မျက်စိကန်း naltrexone နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 49: 914-21 ။ [PubMed]
32 ။ Hodgins, DC, Petri မိုင်။ သိမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကုသမှု။ ခုနှစ်တွင်: Grant က je, Potenza MN, အယ်ဒီတာများ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: ကုသမှုတစ်ခုလက်တွေ့လမ်းညွှန်။ ဝါရှင်တန် (ဒီစီ): အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး, Inc မှ .; 2004 ။ စစ။ 169-87 ။
33 ။ Simpson HB, Fallon BA ဘွဲ့။ obsessive-compulsive ရောဂါ: ခြုံငုံသုံးသပ်။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Pract ။ 2000; 6: 3-17 ။ [PubMed]
34 ။ Sylvain ကို C, Ladouceur R ကို, Boisvert JM ။ သိမှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏အမူအကျင့်ကုသမှု: တစ်ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှု။ J ကို Clin Psychol နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ 1997; 65: 727-32 ။ [PubMed]
35 ။ Ladouceur R ကို, Sylvain ကို C, Boutin ကို C, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏သိမှုကုသမှု။ J ကိုအာရုံကြော Ment dis ။ 2001; 189: 774-80 ။ [PubMed]
36 ။ Eucheburua အီး, Baez, C, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုသုံးကုထုံးပုံစံများ၏ဖာနန်ဒက်ဇ-Montalvo ဂျေနှိုင်းယှဉ်ထိရောက်မှု: ရေရှည်ရလဒ်ကို။ Cog Psychother ပြုမူနေ။ 1996; 24: 51-72 ။
37 ။ Petri မိုင်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: etiology, comorbidity နှင့်ဆက်ဆံမှု။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံး; 2005 ။
38 ။ Dickerson M က, Hinchy J ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံ SL ။ အနည်းဆုံးကုသနည်းများနှင့်ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေ: တစ်ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ J ကို Gamble လုံး။ 1990; 6: 87-102 ။ [PubMed]
39 ။ Hodgins, DC, ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်ဟင်း SR, El-Guebaly N. လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် Self-အကူအညီနဲ့ကုသ။ J ကို Clin Psychol နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ 2001; 69: 50-7 ။ [PubMed]
40 ။ McConaghy N ကို, အမ်းစထရောင်းက MS, Blaszczynski တစ်ဦးက, et al ။ ဆန္ဒရှိကုထုံးနှင့် compulsive လောင်းကစားဝိုင်းအတွက်စိတ်ကူးစိတ်သန်း desensitization ၏ထိန်းချုပ်နှိုင်းယှဉ်။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1983; 142: 366-72 ။ [PubMed]
41 ။ McConaghy N ကို, Blaszczynski တစ်ဦးက, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏အခြားအပြုအမူကုသမှုနှင့်အတူစိတ်ကူးစိတ်သန်း desensitization ၏ Frankova အေနှိုင်းယှဉ်: တစ်နှစ်ခုကိုးဖို့တစ်နှစ်နောက်ဆက်တွဲ။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991; 159: 390-3 ။ [PubMed]
42 ။ Christenson GA, Pyle RL, Mitchell က je ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားအတွက် trichotillomania ၏တစ်သက်တာပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းပါတယ်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991; 52: 415-7 ။ [PubMed]
43 ။ Christenson GA, Mansueto CS ။ Trichotillomania: ဖော်ပြရန်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် phenomenology ။ ခုနှစ်တွင်: Stein DJ သမား, Christenson GA, Holland, E, အယ်ဒီတာများ။ Trichotillomania ။ ဝါရှင်တန် (ဒီစီ): အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး, Inc မှ, 1999 ။ စစ။ 1-42 ။
44 ။ စတန်လေ, MA, Cohen ကို LJ ။ Trichotillomania နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ။ ခုနှစ်တွင်: Stein DJ သမား, Christenson GA, Holland, E, အယ်ဒီတာများ။ Trichotillomania ။ ဝါရှင်တန် (ဒီစီ): အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး, Inc မှ, 1999 ။ စစ။ 225-61 ။
45 ။ Swedo SE, Leonard က HL ။ Trichotillomania: တစ်ဦးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုး compulsive spectrum ကိုရောဂါ? စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 1992; 15: 777-90 ။ [PubMed]
46 ။ Regier DA, Kaelber မှန် CT, Roper MT, et al ။ ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရလဒ်များကို: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်မမှန်များအတွက် ICD-10 လက်တွေ့လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 151: 1340-50 ။ [PubMed]
47 ။ et al du Toit PL, ဗန် Kradenburg J ကို, Niehaus: D ။ စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူးကို အသုံးပြု. comorbid putative obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်နှင့်မပါဘဲလူနာအတွက်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ၏နှိုင်းယှဉ်။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 42: 291-300 ။ [PubMed]
48 ။ Schlosser S က, et al က Black DW, Blum N ကို။ အဆိုပါလူဦးရေဖွဲ့စည်းမှု, phenomenology နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဆံပင်ဆွဲနှင့်အတူ 22 ပုဂ္ဂိုလ်များ၏မိသားစုသမိုင်း။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 6: 147-52 ။ [PubMed]
49 ။ Swedo SE, Leonard က HL, Rapoport JL, et al ။ တစ်ဦးကကို double-မျက်စိကန်း trichotillomania များ၏ကုသမှု clomipramine နှင့် desipramine ၏နှိုင်းယှဉ် (ဆံပင်ဆွဲ) N ကို Engl J ကို Med ။ 1989; 321: 497-501 ။ [PubMed]
50 ။ Christenson GA, Mackenzie တီဘီ, Mitchell က je, et al ။ trichotillomania အတွက် fluoxetine ၏တစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled, ကို double-မျက်စိကန်း crossover လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991; 148: 1566-71 ။ [PubMed]
51 ။ O'Sullivan RL, Christenson GA, Stein DJ သမား။ trichotillomania ၏ Pharmacotherapy ။ ခုနှစ်တွင်: Stein DJ သမား, Christenson GA, Holland, E, အယ်ဒီတာများ။ Trichotillomania ။ ဝါရှင်တန် (ဒီစီ): အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး, Inc မှ, 1999 ။ စစ။ 93-123 ။
52 ။ Streichenwein သည် SM, Thornby JI ။ တစ်ဦးကရေရှည်, trichotillomania များအတွက် fluoxetine များ၏ထိရောက်မှုများကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled crossover ရုံးတင်စစ်ဆေး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995; 152: 1192-6 ။ [PubMed]
53 ။ Christenson GA, Popkin MK, Mackenzie တီဘီ, et al ။ ဆွဲနာတာရှည်ဆံပင်၏ lithium ကုသမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991; 52: 116-20 ။ [PubMed]
54 ။ Corrigan PW, Yudofsky SC, Silver, JM ။ ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအဘို့အ Pharmacological နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကုသမှု။ Hosp အဝန်းစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1993; 44: 125-33 ။ [PubMed]
55 ။ Azrin နယူးဟမ်းရှား, Nunn RG, Frantz SE ။ (trichotillomania) hairpulling ၏ကုသမှု: အလေ့အထမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်နှင့်အပျက်သဘောအလေ့အကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ J ကိုပြုမူနေ Ther Exp စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1980; 11: 13-20 ။
56 ။ ဝုဒ် DW, Wetterneck မှန် CT, Flessner CA. လက်ခံမှုနှင့်ကတိကဝတ်ကုထုံးပေါင်း trichotillomania အဘို့အလေ့အကျင့်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်တဲ့ထိန်းချုပ်ထားအကဲဖြတ်။ Res Ther ပြုမူနေ။ 2006; 44: 639-56 ။ [PubMed]
57 ။ je ကင်မ် SW ပေးသနား။ လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် kleptomania နှင့်အတူ 22 လူနာဆက်စပ် psychopathology ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 43: 378-84 ။ [PubMed]
58 ။ McElroy SL, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG, Hudson JI, et al ။ Kleptomania: 20 ဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးအစီရင်ခံစာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991; 148: 652-7 ။ [PubMed]
59 ။ je ကင်မ် SW ပေးသနား။ kleptomania အတွက်စိတ်ထားနှင့်အစောပိုင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှု။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 43: 223-9 ။ [PubMed]
60 ။ Bayle FJ, Caci H ကို, Millet B, et al ။ kleptomania နှင့်အတူလူနာအတွက်စိတ်ရောဂါမမှန်၏ Psychopathology နှင့် comorbidity ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160: 1509-13 ။ [PubMed]
61 ။ je ပေးသနား။ မိသားစုသမိုင်းနှင့် kleptomania နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်စိတ်ရောဂါ comorbidity ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 44: 437-41 ။ [PubMed]
62 ။ McElroy SL, Hudson JI ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG, et al ။ အဆိုပါ DSM-III ကို-R ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်တခြားနေရာခွဲခြားမရ: ကအခြားစိတ်ရောဂါမမှန်ဖို့လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1992; 149: 318-27 ။ [PubMed]
63 ။ Presta S က, Marazziti: D, Dell'Osso L ကို, et al ။ Kleptomania: အီတလီနမူနာများတွင်လက်တွေ့ features နဲ့ comorbidity ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 43: 7-12 ။ [PubMed]
64 ။ et al je, Levine L ကိုကင်မ် D ကို, ပေးသနား။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 2184-8 ။ [PubMed]
65 ။ je ပေးသနား။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များ၏လက်တွေ့ကို manual ။ ခုနှစ်တွင်: Holland, E, Stein DJ သမား, အယ်ဒီတာများ။ Kleptomania ။ ဝါရှင်တန် (ဒီစီ): အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး, Inc မှ .; 2005 ။
66 ။ je ကင်မ် SW ပေးသနား။ kleptomania များ၏ကုသမှု naltrexone ၏အိတ်ဖွင့်တံဆိပ်လေ့လာမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 63: 349-56 ။ [PubMed]
67 ။ Goldman MJ ။ Kleptomania: အတန်ရာ၏အဓိပ္ပာယ်အောင်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991; 148: 986-96 ။ [PubMed]